Ahoana ny fiantraikan'ny loko amin'ny fitondran-tena? | Martech Zone
Ahoana ny fiantraikan'ny loko amin'ny fitondran-tena?
Alarobia, Septambra 1, 2010 Alakamisy 18 martsa 2021 Douglas Karr
Mahavariana ny siansa momba ny loko, raha ny fahitako azy. Mpamorona tsara - na fiara, mpanamboatra haingon-trano, mpamorona sary, na mpamorona mpikirakira mpampiasa aza dia mahatakatra ny fahasarotan'ireo loko sy ny maha-zava-dehibe azy ireo. Avy amin'ny paleta loko voafantina hahazoana antoka fa manome firindrana - amin'ny tena loko ampiasaina - dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fitondran-tenan'ny mpampiasa.
Mianara bebe kokoa momba ny loko sy ny lokon'ny loko
Color mampitombo ny fanekena marika amin'ny 80%, mitarika mivantana amin'ny fahatokisan'ny mpanjifa. Ity misy fiantraikany amin'ny mpanjifa amerikana ny loko:
Yellow - be fanantenana sy tanora, matetika ampiasaina hanintonana ny sain'ny mpiantsambatra varavarankely.
Red - mavitrika, miteraka maika, mampitombo ny tahan'ny fo, ary matetika ampiasaina amin'ny fivarotana fahazoan-dàlana.
Blue - mamorona ny fahatsapana ny fahatokiana sy ny filaminana. Ny loko maizina kokoa dia matetika no hita amin'ny banky sy orinasa (toy ny marika).
Green - mifandray amin'ny harena. Ny loko mora ampiasaina amin'ny maso ary ampiasaina any amin'ny magazay mba hiala sasatra.
voasary - mahery setra. Izany dia miteraka antso-to-hetsika matanjaka hisoratra anarana, hividy na hivarotra.
Pink - tantaram-pitiavana sy vehivavy, zatra ny varotra vokatra ho an'ny vehivavy sy ny zazavavy kely.
Black - matanjaka sy malama. Nampiasaina hivarotana vokatra lafo vidy.
Purple - zatra mampitony sy milamina, hita matetika amin'ny vokatra hatsarana sy fanoherana fahanterana.
Ho an'ireo mpivarotra am-pivarotana dia zava-kanton'ny fandresen-dahatra ny miantsena. Na dia misy antony maro aza izay mitaona ny fomba sy ny zavatra vidin'ny mpanjifa. Na izany aza, fanapahan-kevitra lehibe no manapa-kevitra amin'ny alàlan'ny sary famantarana, ny loko matanjaka sy maharesy lahatra indrindra. Rehefa mivarotra vokatra vaovao dia zava-dehibe ny fiheverana fa ny mpanjifa dia mametraka ny fisehoan'ny maso sy ny loko ambonin'ireo lafin-javatra hafa toy ny feo, fofona ary firafitra.
Ahoana no fiantraikan'ny loko eo amin'ny safidin'ny mpampiasa sy ny fividianany?
Ity misy mahavariana Sary torohay avy amin'ny KISSmetrics amin'ny loko sy ny fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fividianana. Ny sasany amin'ireo fahitana:
Ireo mpihetsiketsika - dia azo inoana kokoa ny hamaly ny mena, volomboasary, mainty ary ny mpanjaka manga. Hitanao ireo loko ireo amin'ny sakafo haingana, fivarotana fivarotana ary fivarotana fahazoan-dàlana.
Mpividy vola - dia azo inoana kokoa ny hifaneraserana amin'ny tafika an-dranomasina sy vodin-tsambo, hita any amin'ny banky sy fivarotana lehibe.
Mpividy nentin-drazana - liana amin'ny mavokely, manga manga ary loko mena izay hita ao amin'ny fivarotana fitafiana.
Fanamarihana iray lehibe ao anatin'ny infographic dia ny hoe ny kolontsaina samihafa dia misy fiantraikany amin'ny loko hafa!
Tags: maintymanga maitsoBrownlokovarotraecommercefreshnessvoasarymividy fitondran-tenamenatena tratra
Blaogin'ny orinasa: The Infographic
Tsy maty ny SMS. Efa nandre Geo-Fencing ve?
Sep 17, 2010 amin'ny 9: 40 AM
Tena mahaliana ity!
Sep 17, 2010 ao amin'ny 2: PM PM
Mahatalanjona ity zavatra hita ity… Nieritreritra ny hanao varotra manokana tsy ho ela ho an'ireo mpanjifako "amin'ny teti-bola" aho. Ary izao dia fantatro izay loko tokony hampiasaina!
Misaotra lehilahy! Miarahaba ny "Tsara" Manning (fantatrao, ilay tena QB tokoa!) 😉
9 Nov 2011 tamin'ny 7:01 PM
Tena ilaina. Nieritreritra an'izany fotsiny aho rehefa namorona rakotra boky ny andro hafa. Misaotra ny fizarana!
9 Nov 2011 tamin'ny 7:34 PM
Miloka ianao, Grey!
14 Nov 2011 amin'ny 10:09 maraina
14 Nov 2011 tamin'ny 4:59 PM
Lahatsoratra tsara Douglas, ny inforgraphic anao dia manome fitaovana enti-miasa lehibe. Tiako ny psikolojia momba ny loko sy ny fitaoman'izy ireo amin'ny marketing. Rehefa mandinika ny fanazavanao ny loko ianao dia tsy sarotra ny mahatadidy avy hatrany ireo ohatra manohana tsirairay.